I-United Kingdom ibizwa ngeGreat country hhayi ngeze - iyinhlanganisela yamazwe amane ngeqoqo elilodwa. IRoyal England kanye nokuyibuka kwayo, izinqaba zasendulo nezakhiwo zaseWales, ubuhle obumnyama bezintaba ezinhle namachibi aseScotland, amadolobhana asendulo eNyakatho ye-Ireland - konke lokhu kubuye kube yi-United Kingdom.
Yize i-UK nayo ibhekwa njengezwe lezimvula, iyisikhungo somhlaba wonke futhi ingelinye lamazwe athandwa kakhulu kwezokuvakasha. Amadolobha avakashelwa kakhulu eNgilandi yiLondon (inhlokodolobha yaseGreat Britain), engapheli iManchester, “iBeatles” Liverpool, iBirmingham esefashinini, iCambridge yezemfundo kanye ne-Oxford, iStonehenge engaqondakali. EWales, idolobha elidume kakhulu inhlokodolobha yalo, iCardiff. EScotland, izikhungo zezokuvakasha yi-Edinburgh (inhlokodolobha yaseScotland) neGlasgow, eyaziwa njengesikhungo sobuciko. EBelfast (inhlokodolobha yaseNyakatho ye-Ireland), abantu beza kakhulu ukuzozijabulisa ezinkantini ezinomsindo, bavakashele iminyuziyamu yomlando, bababaze imidwebo ethokozisayo neyangempela.
Uma uzovakashela leli zwe elimangazayo, futhi awufuni nje kuphela ukuchitha isikhathi esimnandi futhi uphumule kusuka kuphithizela kwedolobha ngokugcwele, kepha futhi ugcine nesabelomali sakho, uzosizwa nakanjani ngohlu lwabaningi amawebhusayithi awusizo futhi athakazelisayo ngezokuvakasha azungeze iGreat Britain.
Le yiwebhusayithi lapho ungathola isifinyezo esifushane saseBrithani, umlando wayo nesimo sezulu. Uzofunda ngezindlela zokuhamba ezilula kakhulu nezisebenza kahle, phezulu kokuzijabulisa okuhle kakhulu, isilinganiso samanje sokushintshana, ukudla okuthandwa kakhulu, amathiphu ezivakashi. Ngaphezu kwalokho, ungabala izindleko ezilinganayo zosuku kufaka phakathi indawo yokuhlala, ukudla, ukubona indawo, ukuzijabulisa, ukupaka, njll., Ukhetha uhlobo lokuhamba oludingekayo (isabelomali, phakathi, ukunethezeka). Ngaphezu kwalokho, kuwebhusayithi ungakhetha indawo yokuhlala oyifunayo.
Iwebhusayithi ethakazelisa kakhulu enenqwaba yezithombe ezithokozisayo zezindawo ezaziwa kakhulu futhi ezinhle kakhulu zeGreat Britain ezinencazelo emfushane. Kuwebhusayithi, kwethulwa amadolobha amakhulu nokuzijabulisa okudumile. Kule mibhangqwana enothando, isayithi linikeza ukuvakasha okwenziwe ngomumo, izinkambo zothando nokuhamba. Ngaphandle kwalokho, lula kwewebhusayithi ukuthi kunethuba lokuhlela uhambo nomzila ngokuzimela.
Le webhusayithi inikeza uhlu lwezindawo ezithandwa kakhulu eGreat Britain. Ukukhetha okubanzi kwamahhotela, izindawo zokudlela, okokuzijabulisa, okunikezwayo okuhle, ukukhethwa kohambo, nezindiza ezongayo - konke lokhu kungatholakala lapha ngokuya ngezifiso zakho nebhajethi yakho.
Ngaphambi kokuya eBrithani, kuyadingeka ukuthi ujwayele indlela yokuphila, imikhuba, imithetho, amasiko namasiko abantu bomdabu. Ukunganaki kwamagama esitsotsi asetshenziswa kakhulu nezinkulumo, ukushukuma komzimba kungakufaka esimweni esingesihle. Le webhusayithi iqukethe izeluleko ezingaphezu kwama-20 eziwusizo, amaqiniso, nemithetho, okufanele kwaziwe izivakashi. Abantu abaningi bakwamanye amazwe mhlawumbe bayazi ukuthi abaseBrithani bathanda kakhulu ukukhuluma ngesimo sezulu. Ngaphezu kwalokho, lapha ungathola umshuwalense wezivakashi, ukhethe ukuvakasha, uthathe indawo yokuhlala ebusuku, uqashe imoto bese ukhetha inketho elula kakhulu yendiza. Kungenzeka futhi ukuthenga imihlahlandlela yezincwadi emazweni ahlukahlukene nasemadolobheni.
Uma uya eNgilandi, kepha ungazazi izinto eziyisisekelo ngale ndawo, leli sayithi ngelakho. Inemibuzo nezimpendulo ezivame ukubuzwa ngezihloko ezahlukahlukene njengokuhlala ensimini une-visa noma ungenayo, ezokuthutha zomphakathi, ukushintshaniswa kwemali, amanani wezingcingo, amasiko, njll.
Lapha ungathola izinhlobo ezahlukahlukene zokuvakasha kuzo zonke izingxenye zeBrithani. Inikeza ithuba eliyingqayizivele lokungena emkhathini wezwe ubukele ividiyo enezindawo ezinhle kakhulu zedolobha ngalinye. Kuwebhusayithi, kukhona ibhulogi lapho kungenzeka khona ukuthola imininingwane eminingi ethokozisayo. Kubalandeli bezemidlalo, kukhona ukuzijabulisa kwezemidlalo kanye nohlu lwemidlalo. Labo abezeli ukuzonandisa kuphela, kepha futhi nokuletha izikhumbuzo, izipho, izingubo nezicathulo zemikhiqizo eyaziwayo, iwebhusayithi inikeza uhlu lwezitolo nezindawo zokuthenga. Ukukhetha okukhulu kwezindawo zokudlela, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela ezinhle kuzokwenza usesho lwakho lube lula futhi kuzoxazulula inkinga ngokudla. Ukuze ube nomoya omuhle kuwebhusayithi, kukhona nohlu nesheduli yemikhosi yomculo eBrithani. Kungenzeka uhlele uhambo ngokwakho noma ukhethe okulungiselelwe, futhi uthenge amathikithi online.
Lo mthombo umelela izinhlobonhlobo zokuzikhethela kwamahhotela, izindawo zokudlela, izitolo, iminyuziyamu, izindawo, uhlu lwezinkambo ezisakazeke kakhulu nencazelo enemininingwane, amanani nezithombe. Okwe-gourmets kweqiniso noma okulula kwalabo abathanda ukudla nokuzama okuthile okusha isigaba ngokudla neziphuzo ezihlanjululwe nezasendaweni zibekwa kusayithi. Kuzosiza ukuthola i-visa nomshuwalense. Lapha ungafunda izindatshana ezithokozisayo nezindaba.
Onke amawebhusayithi enzelwe ukusiza izivakashi ukuthi zikhethe ukuvakasha okulungile ngokuya ngamathuba akhe wezezimali nokwenza lula usesho.
Ekugcineni, amagama nezincomo zokuhlukana ezimbalwa ezizokusiza uzizwe uqiniseka futhi unethezekile e-United Kingdom.
Sebenzisa ikhadi le-Oyster - lizokuvumela ukuthi wehlise izindleko zakho zokuhamba ngezikhathi ezi-2;
Hlela konke kusengaphambili;
Ilambu lokuhamba, kodwa ngasikhathi sinye uphethe yonke into ebalulekile nawe;
Thatha izingubo ezilula kakhulu (izingubo zomkhosi nezithende eziphakeme zishiya ekhaya)
Vele ube nenhlonipho.
PS: Impela idolobha lokuqala okufanele livakashelwe yiLondon. Uma uya eLondon, ufika esikhumulweni sezindiza saseHeathrow. Ukuze bafinyelele enkabeni yedolobha, abahambi kudingeka baqashe imoto esikhumulweni sezindiza saseHeathrow. Emgwaqweni oya enkabeni, ungajabulela ukubukwa okuhle kweLondon. Ngakho-ke, hamba kahle!
ISydney Yayo Yonke Imizwa Nokunambitheka
I-New Delhi – Indawo Yokuqala Ohambweni Oluya Emakhoneni Ama-4 E-India
Nazi Zonke Izizathu Ezenza Udinge Ukuhamba ENdiya
Ngabe Uzovakashela UJohor Bahru? Lolu lwazi luzoba wusizo kuwe!
Amanani eMalaysia Abavakashi: Amathiphu namasu